Isimemezelo somthetho | | I-Foundation Foundation - Uthando, Ubulili kanye ne-intanethi
Ikhaya Resources Ukuziphendulela ngokomthetho
Leli khasi yilungelo lokumisa umthetho ngokomthetho we-The Reward Foundation. Lewebhusayithi iqukethe ulwazi jikelele mayelana nezindaba zomthetho. Ulwazi aluyona iseluleko, futhi akufanele lugcinwe njengalokhu.
Ulwazi olungokomthetho kuleli webhusayithi lunikezwa "njengalokhu" ngaphandle kwemibono noma iziqinisekiso, ukuveza noma ukuphawula. I-Reward Foundation ayikho imibono noma iziqinisekiso ngokuphathelene nolwazi lwezomthetho kuleli webhusayithi.
Ngaphandle kokubandlululwa ngokujwayelekile kwesigaba esilandelayo, I-Reward Foundation ayifuni ukuthi:
• Ulwazi olusemthethweni kule website luzohlala lukhona, noma lukhona nhlobo; noma
• Ulwazi olusemthethweni kulewebhusayithi luphelele, liyiqiniso, linembile, lisesikhathini, noma alukhohlisi.
Ukusetshenziswa Kwezinsizakalo Newebhusayithi
Uyavuma futhi uyavuma ukuthi:
Ukusebenzisa kwakho Izinsizakalo namawebhusayithi kusengcupheni yakho kuphela. I-Reward Foundation yenze yonke imizamo yokuqinisekisa ukuthi okuqukethwe kumaWebhusayithi (ama) futhi kwenziwa kutholakale ngezinsizakalo kunembile futhi kusesikhathini futhi kulungile ngesikhathi sokushicilelwa. Kodwa-ke, amawebhusayithi kanye nezinsizakalo kunikezwa ngesisekelo 'njengoba sinjalo' futhi 'njengoba kutholakala'. Asikuqinisekisi ukunemba, ukugcina isikhathi, ukuphelela noma ukuqina ngenhloso yokuqukethwe okuhlinzekwe kwiWebhusayithi (ama) noma ngokusebenzisa Izinsizakalo noma ukuthi ukusetshenziswa kweWebhusayithi (ama) ngeke kuphazanyiswe, kungabi namagciwane noma kungabi namaphutha. Awukho umthwalo owamukelwa noma owenzelwe i-The Reward Foundation nganoma yimaphi amaphutha, ukushiywa noma imininingwane engalungile kumawebhusayithi (ama) noma etholakala ngezinsizakalo.
Noma ikuphi okokusebenza okulandiwe noma okutholwe ngenye indlela ngokusebenzisa Izinsizakalo kwenziwa ngokubona kwakho nangenxa yokuzibeka engcupheni futhi uzobophezeleka ekubhekaneni nanoma yikuphi ukonakala kohlelo lwekhompyutha yakho noma ukulahleka kwedatha okuvela ekulandweni kwanoma iyiphi into enjalo.
Asikho iseluleko noma imininingwane, noma ngabe eyomlomo noma ebhaliwe, oyitholile evela ku-The Reward Foundation ezokwakha noma iyiphi iwaranti noma esinye isibopho esingashiwongo kahle kule Migomo Nemibandela.
Isibopho esiphelele seReward Foundation kuwe esivumelwaneni, ukukhwabanisa, (kufaka phakathi ubudedengu) maqondana nale Migomo Nemibandela, ukusetshenziswa kweWebhusayithi (ama) kanye / noma noma yimiphi iMisebenzi kuzokhawulelwa ku- (a) £ 150.00 enkulu futhi ( b) inani olikhokhe ngokusemthethweni ku-The Reward Foundation ngaphansi kwanoma iyiphi inkontileka yezinsizakalo ezikhokhelwayo phakathi nezinyanga ezintathu ezandulela umcimbi okhipha isimangalo.
Uyavuma ngokusobala futhi uyavuma ukuthi i-Reward Foundation ngeke ibhekane nanoma ikuphi ukulimala okungaqondile, okungahle kwenzeke, okukhethekile, okulandelanayo noma okuyisibonelo, noma ngokulahlekelwa okuqondile noma okungaqondile kwenzuzo, imali engenayo, ibhizinisi, ukonga okulindelwe, umusa noma ithuba.
Akukho lutho kule Migomo Nemibandela okuyothinta amalungelo asemthethweni kwanoma yimuphi umthengi noma kubeke eceleni noma kukhawulele noma isiphi isibopho sokukhwabanisa noma sokufa noma sokulimala komuntu okuvela ngenxa yobudedengu be-The Reward Foundation.
Okuqukethwe kumaWebhusayithi futhi kwenziwa kutholakale ngezinsizakalo kungenxa yolwazi olujwayelekile kuphela futhi akuhloselwe, futhi akwenzi lokho, kwakha izeluleko zomthetho noma ezinye izeluleko noma izinsizakalo noma isincomo sokuthenga noma yimuphi umkhiqizo noma insizakalo lapho kufanele kuthathwe isinqumo esithile. Imininingwane, okuqukethwe yiWebhu (ama) kanye Nemisebenzi akuzibheki izimo zakho ikakhulukazi ngakho-ke akufanele wethembele kokuqukethwe yiWebhusayithi (ama) kanye Nezinsizakalo esikhundleni sezeluleko ezifanele zobuchwepheshe.
I-Reward Foundation ayinasibopho sokuthi okuqukethwe kumawebhusayithi (noma amawebhusayithi) noma okutholakala ngokusebenzisa Izinsizakalo kusetshenziswa kanjani, kuhunyushwa kanjani noma yikuphi ukuthembela okubekwa kuwo. Asemukeli noma yimuphi umthwalo wemiphumela yanoma yisiphi isenzo esenziwe ngesisekelo solwazi olunikezwe kwiwebhusayithi (ama) noma olutholakala Ngezinsizakalo.
Akumelwe uthembele kolwazi kule webhusayithi njengesinye iseluleko sezomthetho esivela kuMmeli wakho, uMmeli, uBharterter, Ummeli noma omunye umhlinzeki wezinsizakalo zomthetho.
Uma unemibuzo ethize mayelana nanoma yimuphi umtsetfo wezomthetho kufanele uxoxe noMmeli wakho, Ummeli, uBharterter, Ummeli noma omunye umhlinzeki wezinsizakalo zomthetho.
Akufanele neze ukubambezele ukufuna iseluleko sezomthetho, ukungahambisani neseluleko somthetho, noma uqale noma ushiye noma yisiphi isenzo somthetho ngenxa yolwazi kuleli webhusayithi.
Akukho kulo myalelo wokuvikela umthetho osemthethweni oyokwenqabela noma yiziphi izikweletu zethu nganoma iyiphi indlela engavunyelwe ngaphansi komthetho osebenzayo, noma ukukhipha noma yiziphi izikweletu zethu ezingahle zingavunyelwe ngaphansi komthetho osebenzayo.
Imicimbi engaphandle kolawulo lwethu.
Lesi sigaba somthetho sichaza ukuthi asinasibopho semicimbi engaphandle kwamandla ethu.
I-Reward Foundation ngeke ibophezeleke noma ibhekane nanoma ikuphi ukwehluleka ukwenza, noma ukubambezeleka ekusebenzeni, kwanoma yiziphi izibopho zethu ngaphansi kwale Migomo Nemibandela noma iyiphi inkontileka ehlobene phakathi kwethu edalwe yimicimbi engaphandle kokulawula kwethu okunengqondo (“Force Majeure” ).
Umcimbi We-Force Majeure ufaka noma yisiphi isenzo, umcimbi, okungenzeki, ukushiya noma ingozi engaphezulu kokulawula kwethu okubandakanya futhi kubandakanya ikakhulukazi (ngaphandle komkhawulo) okulandelayo:
Iziteleka, ukukhiywa ngaphandle nezinye izinyathelo zezimboni.
Isiphithiphithi sombango, udlame, ukuhlasela, ukuhlasela kwamaphekula noma usongo lokuhlaselwa kwamaphekula, impi (noma imenyezelwe noma cha) noma isongela noma ilungiselela impi.
Umlilo, ukuqhuma, isiphepho, izikhukhula, ukuzamazama komhlaba, ukwehla, ubhadane noma enye inhlekelele yemvelo.
Ukungenzeki kokusetshenziswa kojantshi, ukuthunyelwa, izindiza, ezokuhamba ngezimoto noma ezinye izindlela zokuhamba zomphakathi noma ezizimele.
Akunakwenzeka ukusetshenziswa kwamanethiwekhi ezokuxhumana ezizimele noma ezizimele.